E-2 र EB-5 VISAS
E2 / L1A व्यवसाय योजना
EB-5 व्यवसाय योजनाहरू
अमेरिकी कम्पनी र बैंक खाता खोल्नुहोस्
E-2 / L-1a भिसा
अमेरिकी ईमिग्रेसन एटर्नीहरूको लागि एक्सिलरी सेवाहरू
हाम्रो सेवाले तपाईंलाई अधिक भिसा आवेदकहरू लिन र तिनीहरूलाई छिटो प्रक्रिया गर्न मद्दत गर्दछ।
हामी एक हो
शीर्ष १० अध्यागमन व्यवसाय योजना लेखकहरू
('EB5 इन्भेस्टर्स म्यागजिन' स्तर अनुसार)।
अमेरिकी अध्यागमनको साथ १००१TP1T सफलताको लागि समर्पित
व्यवसाय योजना शुल्क: १TP२T१,470० आकार:-35-45 pages पृष्ठ। पहिलो ड्राफ्ट टर्नअराउन्ड: 5--7 व्यवसाय दिन।
हामी शीर्ष १० मध्ये एक हो अमेरिकामा आप्रवासन व्यवसाय योजना लेखकहरू त्यसो भए हामी यो तपाईंको लागि सही गर्दछौं!
विशिष्ट बीपीको सामग्री
बजार र उद्योग विश्लेषण
प्रतिस्पर्धा र खरीद प्याटर्न्स
इन्टर्नेट योजना र मार्केटिंग रणनीति
अनुमानित Year बर्ष
लाभ र घाटा कथन
अनुमानित Year बर्ष नकद प्रवाह
हाम्रो व्यवसाय योजना लेखन सेवा किन प्रयोग गर्ने?
तपाईं हाम्रो ज्ञानबाट फाइदा लिनुहुन्छ! हामीसँग अपडेट गरिएको छ आधिकारिक र अनौपचारिक USCIS आवश्यकताहरू।
धेरै जसो हामी अन्य भिसा आवेदकहरूलाई सहयोग गर्दछौं। तिनीहरूलाई USCIS द्वारा खराब व्यापार योजनाहरूको कारण अस्वीकार गरिएको थियो।
यसले हामीलाई सहि कारणहरू हेर्नको लागि अनुमति दिन्छ किन यूएससीआईएसले आवेदन अस्वीकार गर्‍यो। त्यस्तै अन्य आवेदकहरूलाई थप प्रमाणको लागि अनुरोध गरिएको थियो।
त्यो हामी कसरी अन्तिम USCIS आवश्यकताहरू जान्दछौं।
तपाईं एक freaky द्रुत डेलिभरी प्राप्त गर्नुहुनेछ।
तपाईंले आफ्नो भिसा व्यापार योजना 5--7 व्यापार दिनहरूमा देख्नुहुनेछ - हाम्रा सबै प्रतिस्पर्धीहरू बीच सब भन्दा छिटो डेलिभरी समय। थप शुल्कको लागि छिटो days दिनको द्रुत सेवा उपलब्ध छ।
एक अपरिहार्य मूल्य छ!
यो ई-२ / L-1A व्यापार योजनाहरूको लागि मात्र $1,490 हो
उचित भुक्तानी व्यवस्था। 1०१TP1T अग्रिम र 1०१TP१ टी जब तपाईंको व्यापार योजना समाप्त हुन्छ।
त्यसोभए, तपाईले २-3--35 पृष्ठ व्यवसाय योजना पाउनुहुनेछ। Year बर्ष अनुमानहरू सहित। वास्तबमा, we त्यो मा धेरै राम्रो हो!
केवल नेटिजि अंग्रेजी बोल्ने लेखकहरू।
योजना आप्रवास एक हुनको लागि सम्मान गरिएको छ अमेरिकामा शीर्ष १० अध्यागमन व्यवसाय योजना लेखकको ('EB5 निवेशक म्यागजिन, २०१' 'अनुसार)।
E-2 भिसाको बारेमा के खास छ
तपाइँको E-2 भिसा आवेदन को लागी बुझाउने व्यापार योजना USCIS आवश्यक्ताहरु पुरा गर्नु पर्छ।
एक आप्रवासी व्यापार योजना एक USCIS समीक्षकको लागि लेखिएको हो। यसैले, यो E-2 अध्यागमन भिसा प्राप्त गर्ने उद्देश्यको साथ हो। त्यसो भए आवेदक कानूनी रूपमा अमेरिकी व्यवसायमा पेन गर्न सकिन्छ।
तपाईंको अनुप्रयोगको सफलतालाई निर्धारण गर्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कारकहरू मध्ये एक व्यवसाय योजना हो। E-2 भिसा सख्त आवश्यकताहरू भएकोले व्यापार योजनाको सम्भाव्यता कुञ्जी हो।
फलस्वरूप, एउटा व्यावहारिक व्यापार योजनाले अमेरिकी कार्यालय खोल्ने व्यावहारिकतालाई जाँच गर्दछ। त्यो देखाउनको लागि, योजना प्रक्रियामा कसरी गर्न सकिन्छ भनेर हेर्नेछ। साथै, यसले संगठनलाई कसरी असर गर्ने छ, संगठनले आउने वित्तीय जोखिमहरू, र व्यवसाय खोल्ने फाइदाहरू सहने छ कि छैन।
निष्कर्षमा, धेरै चीजहरू E-2 व्यवसाय योजनाको साथ गलत जान सक्छ। उदाहरण को लागी, E-2 व्यापार योजना अपेक्षित कर्मचारीहरु को अनुमानित संख्या संग लक्ष्य मा हुन सक्छ। जहाँसम्म E-2application अझै पनि अस्वीकृत गर्न सकिन्छ। किन? किनभने USCIS सोच्छ कि व्यापार सीमान्त छ।
के यति विशेष छ
L-1A भिसा व्यापार योजना?
तपाइँको L-1 भिसा आवेदन को लागी बुझाउने व्यापार योजना USCIS आवश्यक्ताहरु पुरा गर्नु पर्छ।
एक आप्रवासी व्यापार योजना एक USCIS समीक्षकको लागि लेखिएको हो। उद्देश्य L-1 आव्रजन भिसा प्राप्त गर्नु हो। त्यसैले आवेदक कानूनी रूपमा अमेरिकी शाखामा हस्तान्तरण गर्न सकिन्छ।
सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कारकहरू मध्ये एक व्यवसाय योजना हो। वास्तवमा, यो तपाइँको L-1 भिसा आवेदन पत्रको सफलता निर्धारित गर्दछ।
L-1 भिसाका कठोर आवश्यकताहरू छन्।
L-1 भिसा ब्यापार योजनाको सम्भाव्यता सफल याचिकाको लागि महत्वपूर्ण हो।
एक सम्भाव्य व्यवसाय योजनाले अमेरिकी कर्मचारीलाई विदेशी अफिसमा स्थानान्तरण गर्ने व्यावहारिकता परीक्षण गर्दछ।
योजनाले स्थान्तरण कसरी गर्न सकिन्छ भनेर हेर्नेछ। साथै, यसले संगठनलाई कसरी असर गर्ने छ, संगठनले आउने वित्तीय जोखिमहरू सहन सक्छ कि गर्दैन, र कर्मचारीलाई स्थानान्तरण गर्दा हुने फाइदाहरू।
धेरै चीजहरू L-1 व्यवसाय योजनाको साथ गलत हुन सक्छ। उदाहरण को लागी, L-1 व्यापार योजना अपेक्षित कर्मचारीहरु को अनुमानित संख्या संग लक्ष्य मा हुन सक्छ। जबकि L-1 अनुप्रयोग अझै पनि अस्वीकृत गर्न सकिन्छ। किन? किनभने USCIS सोच्दछ कि कम्पनी "कार्यकारी वा व्यवस्थापकलाई समर्थन गर्न पर्याप्त संगठनात्मक जटिलता वा / र श्रेणीक्रम अभाव छ।"
प्रक्रिया सुरू गर्न
1. तपाइँको ग्राहक वा तपाइँ एक धेरै साधारण प्रश्नावली पूरा गर्न आवश्यक छ।
२. हामी सबै उत्तरहरू समीक्षा गर्दछौं, --additional थप प्रश्नहरू सोध्नुहोस्, तपाईंको ग्राहकले हाम्रो शुल्कको 1०१TP१ टी दिन्छ - र हामी सुरु गर्न तयार छौं।
5--7 व्यवसाय दिनहरूमा तपाईं प्रारम्भिक ड्राफ्ट प्राप्त गर्नुहुनेछ।
We. हामीले तपाइँको सन्दर्भको लागि पूरा गरेको व्यापार योजना वितरण गर्दछौं।
We. हामी तपाईंलाई मद्दत गर्दछौं यदि तपाईंसँग केहि प्रश्नहरू छन् भने।
योजनाइमिग्रेशन एक कानून फर्म होईन र एक वकील को सल्लाह को लागी विकल्प छैन।
शेपिनविसा संयुक्त राज्य अमेरिकाको नागरिकता र आप्रवासन सेवा (युएससीआईएस) वा अन्य कुनै सरकारी एजेन्सीसँग सम्बद्ध वा समर्थित छैन।
शेपिनविसा वेबसाइट र यसको सेवाहरू हाम्रो गोपनीयता नीति र प्रयोग सर्तहरूको अधीनमा छन्।
वकालत सेवाहरू स्वतन्त्र वकिल द्वारा प्रदान गरीन्छन् र एक अलग अटर्नी सम्झौताको अधीनमा छन्।
कानून द्वारा तोकिए अनुसार हामी हाम्रा उत्पादनहरू वा सेवाहरूको कुनै पनि परिणामहरू लिन सक्ने तपाईंको क्षमताको बारेमा कुनै ग्यारेन्टी दिन सक्दैनौं र गर्न सक्दैनौं। यस वेबसाईट भित्र प्रयोग भएका कुनै सन्दर्भ वा उदाहरणहरू केवल उद्देश्यका लागि मात्र प्रयोग गरिन्छ। तपाईको नतीजाहरु फरक हुन्छन् र तपाईको पृष्ठभूमिमा सीमित नभएको, युएससीआईएस भिसा आवश्यकताहरु पूरा गर्ने सफलता, र अन्य कारकहरुमा धेरै कारकहरुमा निर्भर हुन्छन्। यदि तपाईं त्यो स्वीकार्न तयार हुनुहुन्न भने, कृपया अगाडि बढ्न नखोज्नुहोस् र हामीबाट कुनै पनि सेवाहरू स्वीकार नगर्नुहोस्।
तपाइँको हेडि Text पाठ यहाँ थप्नुहोस्
प्रतिलिपि अधिकार © २०२१ PlanImmigration
नेपाली English Español हिन्दी اردو Türkçe বাংলা ગુજરાતી Русский 한국어 Português do Brasil 简体中文 香港中文版 O‘zbekcha العربية Deutsch தமிழ் Tiếng Việt Italiano